अन्डोरा र स्पेनमा सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्टहरू Absolut यात्रा
अन्डोरा र स्पेनमा सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्टहरू
Absolut यात्रा | | Andorra
गर्मी को अन्त पछि, यो हाम्रो अर्को getaways को बारे मा सोच्न को लागी समय हो। तसर्थ, अवस्थित संभावनाहरूको विस्तृत विविधता बीचको विकल्प हो हिउँ र स्कीइ enjoyको आनन्द लिई केहि दिनहरू खर्च गर्नुहोस् अन्डोरा वा स्पेनमा विभिन्न स्टेशनहरूमा।
एक विशिष्ट स्टेशन बाट यो भन्न सँधै सजिलो हुँदैन, तल तपाईं यी क्षेत्रहरूमा सबै भन्दा राम्रो स्की रिसोर्टहरूको केही विवरण जान्न सक्नुहुनेछ।
2 बाकिरा बेरेट
4 ला मोलिना
5 सिएरा नेवाडा
ग्रान्डभलिरा स्की रिसोर्ट भएर अरूबाट फरक छ सबै Pyrenees को सबैभन्दा ठूलो। Andorra को प्रिन्सिपलिटी मा स्थित छ, यो वर्तमान मा स्कीइबल ढलान को 200 भन्दा अधिक किलोमिटर छ। यस स्टेशनको मुख्य विशेषताहरु यो हो अल्पाइन स्कीइ inमा विशेषज्ञता: खेलकुद जुन एक लामो समयसम्म सम्भव समयमा ट्र्याक खसाल्ने समावेश गर्दछ, विशेष गरी घुमाउने मार्गलाई ट्रेस गर्दै। तपाईं सबैभन्दा राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ Esquiades.com को साथ Andorra मा जानुहोस्.
बाकिरा बेरेटमा ट्र्याकहरू
बाकिरा बेरेट हो, यदि सम्भव छ भने, स्पेनमा सबैभन्दा प्रसिद्ध स्की रिसोर्टमध्ये एक हो, किनकि यसमा सेलिब्रेटीहरूको ठूलो भीडले भाग लिएको छ, जसमध्ये राजा फेलिप VI आफै बाहिर आउँदछन्। यस स्टेशनसँग यसको दर्शकहरूको बिभिन्न स्तरहरूमा अनुकूलित हुन डिजाइन गरिएको ट्र्याकहरूको ठूलो संख्या छ। यी ट्र्याकहरू १ 155 किलोमिटर भन्दा बढीसम्म फैलिएका छन्। एरन उपत्यकामा अवस्थित, क्याटालान पाइरेनीजमा, यो भ्रमण गरेर तपाईं यसको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ यस क्षेत्रको रमणीय दृश्य र रमाईलो गेस्ट्रोनोमीबाट पनि।
फॉर्मिगल स्टेशन छ Sk sk स्कीइबल स्लोपहरू कुल १157 किलोमिटरसम्म थप्नुहोस्। यो स्टेशनसँग दुई स्नोपार्क, दुई बोर्डक्रस र एउटा स्नोबोर्ड ट्र्याक पनि छ। कम्प्लेक्सले अन्य सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछ जस्तै क्रस-कन्ट्री स्कीइंग वा डिल राइडहरू। फॉर्मिगलको बिभिन्न सुविधाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यसले पन्तीकोसा स्टेशनसँग यसको स्की पास साझा गर्दछ, त्यसैले तपाईं दुई स्टेशनहरूमा स्कि मात्र गर्न सक्नुहुन्न तर अन्तिममा रहेको स्पामा आराम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फार्मिगल स्टेशन ह्वेस्का प्रान्तमा अवस्थित छ।
कार्टोलोनियामा Cerdaña क्षेत्रमा अवस्थित, La Molina स्टेशन आकार मा सानो छ, तर कम गुणवत्ता को कारण को लागी होईन। कुलमा, रिसोर्टमा sl 54 ढलानहरू छन् जुन कुल sk१ स्कीइबल किलोमिटर जम्मा गर्दछ। ला मोलिना स्टेशन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो संख्याको होस्टिंगको लागि परिचित छ स्कीइंग को दुनिया मा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरु। यसको सेवाहरू मध्ये अन्यमा स्नो ग्रमर्स, स्नोमोबाइल र स्लेजमा आउटिंगमा सवारीहरू भेट्न सकिन्छ।
सियरा नेभाडा स्की रिसोर्ट स्पेनमा सबैभन्दा उत्तम रिसोर्टहरू मध्ये एक हुन लोकप्रिय छ। हालका वर्षहरूमा, स्टेशन पनि यसको लागि बाहिर उभिएको छ बच्चाहरूलाई लक्षित व्यापक प्रोग्रामिंग। यस तरिकाले, सियरा नेभाडा रिसोर्टसँग घरको सब भन्दा सानोको अभ्यासको लागि डिजाइन गरिएको ढालहरू, साथ साथै एक साहसिक पार्क जसमा रोलर कोस्टर र स्नोमोबाइलजस्ता आकर्षणहरू समावेश छन्। En Esquiades.com तपाईं सिएरा नेभादा स्टेशन र स्पेन, अन्डोरा र फ्रान्समा अवस्थित अन्य थुप्रैको लागि सबै प्रस्तावहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
सर्लर स्टेशन अर्गोनियन पिरिनेसको उच्च स्की स्टेशन हो। बेनास्की उपत्यकामा अवस्थित, सर्लर अरु भन्दा फरक छ किनकि यो चारैनाको दर्शनीय परिदृश्य र उच्च चुचुराहरूले घेरिएको छ। त्यस्तै, सर्लर स्टेशन छ सबैभन्दा ठूला ढलानहरू यो क्षेत्रमा फेला पार्न सकिन्छ, १,1.500०० र २,2.700०० मिटरको बीचमा। कम्प्लेक्समा kilometers kilometers किलोमिटर स्कीप स्लोपहरू छन्, जुन यसका आगन्तुकहरूको सिक्ने बिभिन्न डिग्रीहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो।
हिउँको गुणस्तर बोई-टोल रिसोर्टको सब भन्दा सकारात्मक पक्ष हो। Lleida प्रान्त मा अवस्थित, स्टेशन मा रातो रन को एक ठूलो संख्या छ, त्यसैले धेरै जसो परिसर छ मध्यम र उच्च स्तरको स्कीयरहरूको लागि डिजाइन गरिएको, स्किइ ofको अभ्यासमा सुरूवात गरिरहेकाहरूको लागि होईन। स्टेशनसँग स्नोपार्कको लागि आरक्षित क्षेत्र पनि छ, जुन "फ्रि एक्सपेरियन्सी" भनेर चिनिन्छ। साथै, बोई-ट्याल स्टेशनको अर्को अनुकूल तत्व यो छ कि यो प्राय: मानिसहरूमा धेरै भीड हुँदैन।
यो स्टेशन विशेष रूपमा जाका नगरपालिकामा, अरागोन उपत्यकाको बीचमा अवस्थित छ। यस कम्प्लेक्सको संख्यामा रेस्टुरेन्ट सेवाहरू र kilometers० किलोमिटर स्की स्लोपहरू छन्। यसको स्थानको कारण, Astún स्की रिसोर्ट सही तरिकाले पर्यटन र मनोरन्जन गतिविधिहरूको साथ खेल संयोजन गर्दछ। यस तरीकाले, Astún को लागि एक getaway मा स्कीइंग भन्दा टाढा जान सक्ने विभिन्न प्रकारका पहलहरू सामेल हुन सक्छन्।.
Andorra मा, Vallnord स्की रिसोर्ट अर्कल र La Massana उपत्यकामा छ। यो अधिक 68 than ट्र्याक कूल kilometers kilometers किलोमिटर, पूरा गरीaउच्च गुणवत्ता हिउँ, स्टेशन को भौगोलिक स्थान द्वारा ग्यारेन्टी। कम्प्लेक्समा माउन्टेन बाइकिंगका प्रेमीहरूको लागि बाइक पार्क पनि छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अन्डोरा र स्पेनमा सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्टहरू